Sida loo soo qabto video ka website effortlessly
> Resource > Beddelaan > Sida loo qabsaday Video fudayd
Farsamo ahaan, video qabashada waa hab ka mid ah diinta ah video signal analog in video digital. Ma doonaa mid aad u qoto dheer galay qeexitaanka farsamo ee video qabashada halka ijaara ayaa tirada ugu horeysay soo baxday in nooca xaaladaha samayn aad u baahan tahay in ay qabsadaan video tagaan. Dhab ahaantii, waxaa jira afar. Marka hore, waxaa laga yaabaa in aad dareento sida ay u qabashada hoorto video; labaad, idin dafo oo video laga desktop; saddexaad, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in ay qabsadaan video ka webcam, iyo ugu dambeyntii, ka aaladaha kale ee dibadda sida kamaradaha digital idin dafo video. Ma is weydiisay sida aad u qabsan kartaa video xaaladaha kuwa kor ku xusan? Ha cabsan. Halkan waxaa xal ah. Oo annaguna waxaannu u xaaladda hore ayaa la siiyaa laba siyaabood: dajinta iyo duubo. Na raaca inay iyagii hubi hoos ku qoran.
Qeybta 1: Sidee si ay u qoraan hoorto video la Wondershare Video Converter Ultimate
Qeybta 2: Sida loo soo bixi hoorto video
Part 3: Sida loo soo qabto video ka desktop
Qeybta 4: Sida loo soo qabto video ka webcam
Qeybta 5: Sida loo soo qabto video ka qalabka dibadda
Tani waa qayb ka mid in ay kuu sheegaan sida loo isticmaalo Wondershare Video Converter Ultimate ah si ay u qoraan hoorto video aan ka kaaftoomi. Marka hore waa hordhaca ah ee barnaamijka, ka dibna waxaad arki kartaa tutorial ah tallaabo-tallaabo.
Qalab lagula talinayaa in ay u qoraan geeyo video:
Record video ka websites aan khasaaro tayo leh
Beddelaan 30X ka dhaqso badan converters kale in ku dhow oo dhan qaabab loo jecel yahay
Guba videos in disc DVD, folder DVD fudayd Baro More >>
Talaabooyinka si ay u qoraan geeyo video:
Waxaad u baahan tahay inaad download hore iyo rakibi Wondershare Video Converter Ultimate ku on your computer ka dibna raac talaabooyinka si ay u qoraan hoorto video.
Talaabada 1: Dul si aad u hesho videos aad jeceshahay ka websites sida YouTube, Dailymotion, vimeo iyo in ka badan.
Talaabada 2: Hit menu Start ee your computer si aad u hesho a " waxaa Wondershare Video taariikhqorihii "doorasho. Waxaa Riix oo taga si ciyaari ku videos helay. marka video la ciyaaro, qooys oo cas oo ka muuqan doona shaashada video iyo sidoo kale ah Record button noqon doonaa bidix ee sare. Riix badhanka si ay u bilaabaan in ay rikoor. Marka aad joojiso duubay, waxaa laguu keenay in doonaa gal ah soo bandhigay file video duubay.
Talaabada 3: Haddii aad u baahan tahay inuu ciyaaro video ku saabsan qalabka la qaadi karo aad, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si loogu badalo videos ah. Ha welwelin, weli waxaad isticmaali kartaa Wondershare Video Converter Ultimate in uu tan sameeyo. Dejinta video ka duubo si ay barnaamijka iyo doortaan qaab wax soo saarka ah. Ugu dambeyntii, riix badalo badhanka si aad u hesho qaabab file doonayo.
Tani waa qayb ka mid in uu kuu sheego sida ay u qabsadaan geeyo video iyada oo si fudud u soo degsado. Marka hore waxaad arki doontaa aalad lagula talinayaa oo markaas waxaad eegi kartaa tallaabooyinka faahfaahsan.
Qalab lagula talinayaa in ay ka soo dejisan geeyo video:
Download videos ka 1000+ video goobaha sida YouTube, Hulu iyo in ka badan.
Download videos 3x + dhakhso
Beddelaan video inay qaabab caadiga ah sida AVI, MOV iyo qalabka sida iPad, iPhone oo dheeraad ah
Play iyo maarayn qabtay iyo file video deegaanka Baro More >>
Tallaabooyinka lagu soo bixi geeyo video:
Waxaad kala soo bixi kartaa geeyo video si fudud iyada oo saddex tallaabo oo fudud sida hoos ku qoran. Wixii macluumaad faahfaahsan oo dheeraad ah, fadlan eeg Download Video Streaming .
Talaabada 1: Dul si aad u hesho videos aad jeceshahay Talaabada 2: Download videos si fudud Talaabada 3: Beddelaan videos in qaabab ama aaladaha kale ee (optional)
Qeybta 3: Sida loo soo qabto video ka desktop
Mararka qaarkood marka aad doonayso in aad wax ka Casharrada video ku saabsan sida ay u isticmaalaan barnaamij gaar ah oo ku saabsan kombiyuutar, waxaad u baahan tahay oo laga yaabo in lagu soo qabto video ka desktop-ka. Democreator Wondershare waa qalab sax ah in aad u baahan tahay.
Qalab lagula talinayaa in ay qabsadaan video ka desktop:
Wondershare DemoCreator Gelineya inaad si ay u qoraan video ka desktop si ay u sameeyaan Casharrada video oo ay qabsadaan hawlaha onscreen si ay u daabacaan sida video ah. Markaasay aad la wadaagi karto video ah on YouTube. Xitaa in aad edit karaa goodhiyaha la badan oo fursadaha. Baro More >>
Talaabooyinka in ay qabsadaan video ka desktop:
Download barnaamijkan oo ka dibna aan arko sida ay u qabsadaan video ka desktop-ka. Waxaad kaloo ka eegi kartaa hagahan wixii macluumaad dheeraad ah. Halkan waa mid kooban oo ka mid ah tallaabooyinka fudud.
Talaabada 1: Dooro soonaha duubo iyo audio Tallaabo 2: Ku bilow in rikoor ka desktop Talaabada 3: badbaadi file lagu duubay
Looma baahna in uu lacag kasta oo arrintan ku saabsan. Windows Kan sameeyey Movie, taas oo hore on your computer haddii aad isticmaalayso nidaam hawlgalka Windows, awood kuu siinayaa in ay qabsadaan video ka webcam si fudud. Na raac si aad u aragto sida loo sameeyo waa ay dhici.
Qalab lagula talinayaa in ay qabsadaan video ka webcam,
Isku dar videos iyo sawiro
Easy si ay u qoraan iyo videos edit
La wadaag videos in baraha bulshada sida Facebook iyo YouTube Baro More >>
Talaabooyinka in ay qabsadaan video ka webcam,
Bal aan hubiyo tallaabooyinka hoos ku faahfaahsan.
Talaabada 1: Haddii aad isticmaalayso camera dibadda, waa inaad marka hore iska hubi in waxa la rakibaa galay dekedda USB ah. Markaas qabsato mugga of your computer si ay ugu badnaan ay u bilaabaan Windows Kan sameeyey Movie si ay u helaan diyaar.
Talaabada 2: Marka aad furay Kan sameeyey Windows Movie, tag Home tab menu oo guji webcam Video . Riix cas Record button dusheeda ka tagay si ay u bilaabaan qabashada video.
Talaabada 3: Riix buluuga Stop button iyo daaqad curiyo doonaa, waayo, waxaad si loo badbaadiyo file video ay u My Videos . Waxaad ku eegaan karo video iyo dar saamaynta qaar ka mid ah waxa ay in.
Tallaabada 4: Ka dib markii dhowr hagaajin, aad dhammaysay shaqada. Riix Save movie iyo dooran xalka aad rabto. Markaas geliyaan video ay u YouTube ama Facebook.
The qalabka dibadda waxaan ka hadleynaa halkan waa sida a camera Video Digital ama fiidiyo Digital ah iyo kuwa kale. Uma baahnid inaad wax qalab dheeraad ah si ay shaqada taas loo sameeyo.
Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in aad CAMERA iyo Cable ah !!
Talaabooyinka in ay qabsadaan video ka qalabka dibadda:
Hubi tallaabooyinka hoos ku faahfaahsan oo aad ka heli doontaa ugu fududaynay Quraanka si ay u gutaan hawshan.
Talaabada 1: Isku camera aad u computer ka via cable USB ah. Xasuusnow in aanad ka noqon kamaradaha oo waxay ag qotomiyeen si ay u qoraan hab. Marka saaxir video dejinta ah u muuqataa, magacaabi video ah oo ku saabsan in ay toogtaan oo guji aad tahay Browse in ay doortaan gal ah file video badbaadiya.
Talaabada 2: Dooro qaab aad rabto. Video ayaa la badbaadin karaa in files AVI iyo wmv. Dooro wax kasta oo aad markaas door bidaan riix Next .
Talaabada 3: Hel Start Video Import badhanka si ay u bilaabaan qabashada video ka qalab dibadda. Hubi in aad tahay qof xaq u fog camera si ay si fiican ee aad qaadi karto. Riix Stop Video Import ay uga maqsuudeen Qabsashada oo guji Finish in la sameeyo la qabsashada. Markaas waxaad eegi kartaa files ee folder hore dhigay.
Waxaan ku liis dhan xal u ah xaaladaha kor ku xusan waxaad la kulmi kartaa. Haddii aad qabto dhibaatooyin kale, waa inaad u daysaan karaa hoos ku meel comment ah.